GOCHAA FARRUMMAA « QEERROO
Maraamartoo abboottii qabsoof ijoolleen si’annaa biyyaa amabaa keessa jiraan kana Akka nama fiilmii tolaa daawwatuutti namoota milli’oona hedduun daawwaachaa jirra. Dhugaan kana keessaatti Akka kubbaa miillaatti miseensota gurmuuleen oliif gad kokkolla’aamaa jirti. Maarree xiqqoodhaan nomoota geepha fudhachuuf dafqa xurruursaa kubbaa delleqqaa kuttannii ka’aan gara mannii masaanuu ti galchuuf wixxiffattaan daawwattannii yoo beektaan hangami akka hafuura nama kutuuf gurmuun ati deggertuu yoo kubbaa mannii keessaatti marmaruu namnuu tessoo Irraa olka’aan carraana, nama Isa bira jiruu itti uttaalee hammataa, kan dhugnguun Wal-callaasuus ni muldhata. Kun hunduu eegaa raawwatee booda namnuu quba Wal hin qabu gara mana isaatti fiigga, gurmuun hinjiffannoon dirree keessaa bahee sirbaan diichissaa, gurmuun mo’attamee garuu uurruu dhiibaa mataa buussee yaa’a. Gaafaa birraadhaaf sirriitti lenjjiffamannii tapha cimaa taphachuuf yaadaan of-qopheessuu eegalu. Maarree ega waan tapha kuphaa kana fiigdotaaf wal-dorgomttootta Activistummaaf mal-dha’ii madda galliif kan fiigaanniif isaan Warra dhugaadhaaf dhiigaan gidduutti geggeeffamuu hardhadhaa kana ha illaallu. Warra madda gallii gabbiffachuuf fiiggaan kana gaafa teenyyee illaallu qabsoo sabbabeeffachuun alaabaa Saba baldhaa fanniffatannii gurmuu callaqissaa kana faggootti muldhatu wayyii uummuun Isa da’oo tolfachuun waan billiqqeessa sammuu nama hatu ija uummattaatti daawwachiissuun Abdii maseenaa abddachiissannii Koroojjoo isaannii dhadha’aachiissaa jiru. Gurmuun akkana kunneen ama akkuma gabaa maalifuu fi gabaa lagaa kan Gimbiitti arganaan kunneen yeroo inni Mana cornaaqqee bannee bu’aa Irraa buuffachuu
dhaga’uun kaanniis Mana cornee kan birraa cinnatti banee gabaa Irraa Kuta. Yeroo kana lameenuu kissaaraa keessaa seenu. Namni biraan immoo achii ASI ba’ee Mana buskuttiif shan keessa buusaa itti dabaluudhaan gattii rakkassaan gurguraan. Isaan kaan waan hin mlkoofneef namtichuma sana diinomsuu eegalu, takka wal tahuu takkaa Wal faccaasu. Maalan adda addaa namootta bittinneessu. Kun madda gallii isaannii Akka gabbisuuf oliif gad fiigguu amaloota nama akkanaati. Isaan gabaaf Wal-Baldheessaan maallaqa waan nama caalaa jaallatanniif. Dhugaa dubbachuuf yoo tahee warri hardha qabsootti Jira jennuu Biyyaa guddattetti jedhamtu keessaatti sammuu nama xiqqaan yaaduun natti fakkaata. Kan of kabajuu numa mataa keenya kan beekaa of taassissuu danda’uun abbaaabbaan mataa mataan yoo carraqqachuu waanwaani namaan gadii nu nama godhu hin jiru. Garuu gochaan hardha maqaa qabsoof, qabsa’aa sabaattiin ddallagamaa jiruu amlee nama cabsuu irra taree namootta baayyee Abdii kutachiisseera. Yeroo Haarmeen Oromoo immimmaan lollaassa oltee bulaa jirtu kana keessa qarroof Abdii biyyaa daandii rakkoo keessa naqqannii, gurmuun kan ijjaaraan murraasni durroomaan. Dhugaa jiru yoo dubbannee maqaa nuuf bixxillaan jedhannii kan callissaan kumaattamaan jiru. Callisuun keenya garuu diina qaawwaan saaqee Mana nu seenuuf dafqa coccophissee nu lolaa jiruuf kara bannee olseensissuu jira. Ega warri dibbee gandummaaf Xaxxuun miiddiyaa Maddi isaa boorsaa Uummattaa tahee tokkummaa dhaan kan maramee, garuu keessi isaa uttubbaa gandummaa diinnii hordeen kan socho’uu dha. Laffee gootaa lafaa kaassuu mana irra deemuun Warra amaleeffannaa godhamaa, warraana bosona jiruu, abbabboottii qabsoo Warra jiruuf jireenya isaannii gad dhiisannii Biyyaaf jiraatan ceeqquuf, riffachiissuu araba dheedheerraa qaban akkanaa bara kana gad yaa’annii dorgommii guurrannaa maallaqa irratti akka warraabbessaa yuussannii wal waamaa jiru.
Gurmuun dhugaaf dhiiggu garuu galliin lammii iirraa qabsoof galu warra weerrartuu kanaan irraa citees hanga dhumaatti qabsoo iituma fufaan. Gochaan seeraa dhabdee kan raawwaachaa jiru qabsa’ootta qofaa irraatti uttuu hin taanne dhaloota haharhahardhaaf boruu hndaa irraatti ta’uu qquba qbna. Haala kamiin sirreessuu dandeenya? Itti fufa….
« Barsiisotni Digirii Duraa Baratan Ammalee Carraan Dalagaa Mootummaa Argachuu Dhiphaadha Jedhuun Komii Hamaa Kaasaa Jiran
Pingback: GOCHAA FARRUMMAA – OROMIYAANWANOFITIABBAATUU EGATAA
Pingback: GOCHAA FARRUMMAA – oromiyaanwanofitiabbatuegata